अघिल्लो म’न्त्रीले २० महिनामा गर्न नसकेको काम, मन्त्री नेम्बाङले १०० दिनमै गरेर देखाइ दिए,! « Online Tv Nepal
अघिल्लो म’न्त्रीले २० महिनामा गर्न नसकेको काम, मन्त्री नेम्बाङले १०० दिनमै गरेर देखाइ दिए,!
Published : 11 March, 2020 9:01 am
मन्त्रीहरुको कामप्रति जनस्तरबाट निकै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर चार गते मन्त्रीमण्डलमा फे,रबदल गरे । उनले ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई ह,टाएर नयाँ मन्त्री नि,युक्त गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी स,म्हाल्दै आएका रघुवीर महासेठलाई हटाएर बसन्तकुमार नेम्वाङलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
गत मंसिर ५ गतेबाट आफ्नो कार्यभा,र स,म्हालेका नेम्वाङले गरेका कामको पछिल्लो समय निकै च,र्चा हुन थालेको छ । अघिल्लो मन्त्रीले २० महिनामा पनि गर्न नसकेका कामहरु उनले सय दिनमै गरेर दे,खाईदिएका छन् ।मन्त्री नेम्बाङको सय दिनको कार्यकालमा सडक विभाग अन्तर्गतको २४ हजार ३ सय वर्गकिलोमीटर सडकको ९ हजार ५०० खा,ल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका २७ किलोमिटर सडक का,लोपत्रे भएका छन् । त्यस्तै, यसै आर्थिक वर्षभित्र उपत्यकाको थप ८५ किलोमीटर सडक का,लोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।